Akụkọ - Gini mere ikpere aka gị adịghị iru ala?
Gini mere ikpere aka gi adighi adi?
Ndị enyi na-enwe mmasị igwu egwuregwu tenis, badminton na ịkụ tennis ga-emerụ ha n’aka mgbe ha na-agba bọọlụ, tụmadị mgbe ha na-egwu egwu. Ndị ọkachamara na-agwa anyị na nke a ka a na-akpọkarị "nkwonkwo tennis". Mkpịsị aka ịkụ tenis a kachasị na oge ịkụ bọl, nkwojiaka nkwonkwo aka anaghị agbachi, enweghị mgbachi aka, akwara mgbatị akwara na-agbatị elu, na-eme ka mmebi mgbakwunye. Nkwonkwo aka nke humerus, ọkpụkpụ na-egbuke egbuke na ulna guzobere, ọ na-esonye ogwe aka elu na ogwe aka ala, na-ejikọ aka na-agagharị agagharị nke ọma ma na-emekọ ihe ọnụ ma na-eme ka ogwe aka ahụ gbagọọ, gbatịa ma gbanwee ka ọ rụọ ọrụ ka mma. Agbanyeghị ọrụ ịmegharị ugboro ugboro, mmega ahụ gabigara ókè, mmerụ mberede, na-ebute ike ọgwụgwụ tendon, mbufụt na etuto, dị ka "ikpere aka tennis" na "golf ikiaka" Nke a ga-emetụtakwa ọrụ aka, na-eme ka ikuku na-agagharị agagharị. Tụkwasị na nke ahụ, mmerụ ahụ akwara aka elu ga-emetụta ekwe na ịgbatị ikpere aka.
N'ịchọ na akwara ndị na-emerụkarị na ikpere ụkwụ, onye na-echebe ikpere ụkwụ na-arụ ọrụ kwesịrị ekwesị iji gbochie ọrụ nke akwara mmerụ ahụ ma belata ogo mmerụ ahụ na-eme ka mkparịta ụka gabigara ókè. Nhazi nke ikpuchi ikpere nwere ike belata ihe mgbu ma zere ike ọgwụgwụ, ma nyere aka ọrụ aka ijikọta ọnụ.
Ikiaka nkwado atụmatụ 1. Thermotherapy: Ọgwụ na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ bụ ọgwụgwọ kachasị mkpa maka nkwonkwo na akwara merụrụ ahụ nke ọtụtụ ndị nkụzi na ndị dọkịta na-emezigharị. Ejiri akwa akwa na-eme ka ikpuchi ikpere, nke nwere ike ịbịaru nso na saịtị ahụ, gbochie ọnwụ nke ahụ ọkụ, belata ihe mgbu nke akụkụ ahụ metụtara, ma mee ka mgbake dị ngwa. 2. Na-akwalite mgbasa ọbara: N’ihi ikpo ọkụ nke ọgwụgwọ nke ikpere aka na-echekwa, kwalite mgbasa ọbara nke anụ ahụ ike na saịtị iji. Mmetụta a bara ezigbo uru maka ọgwụgwọ ọrịa ogbu na nkwonkwo na nkwonkwo mgbu. Tụkwasị na nke ahụ, ntụgharị ọbara dị mma nwere ike ịrụ ọrụ dị mkpa karị na mmegharị akwara ma belata mmerụ ahụ. 3. Nkwado na ịkwado mmetụta: ikpuchi ikpere nwere ike ime ka nkwonkwo na njikọta dịkwuo ike iji gbochie mmetụta nke ike mpụga. Nchedo dị irè nke nkwonkwo na akwara.
4. Dị fechaa, breathable na-agbanwe ihe onwunwe, ala na-eyi, na ezi nkwado na ujo mitigation, igwe washable, mfe eyi, adabara na-agba ọsọ, bọl egwuregwu na n'èzí egwuregwu.
Peoplefọdụ ndị mmadụ na-enwe mmasị n'egwuregwu ndị jọgburu onwe ha, ga-eyi uwe nchebe ndị ọkachamara, iji gbochie mmerụ ahụ. N'ikpeazụ, anyị kwesịrị ichetara gị na ihe nchebe naanị na-arụ ọrụ nchebe na egwuregwu, yabụ na itinye ụfọdụ ihe nchebe, anyị kwesịrị ịnwale ịchịkwa mmegharị teknụzụ oge niile, na-agbaso iwu nke asọmpi ahụ.